Iirobhothi zasekhitshini-yeyiphi endifanele ukuyikhetha, iimodeli kunye nezibonelelo? | IBezzia
Iirobhothi zasekhitshini, yeyiphi endifanele ndiyikhethe?
USusana godoy | 09/06/2021 16:00 | Ukupheka
Ngomnye wemibuzo esinokuzibuza yona kakhulu kwaye kukuba mininzi kwaye yahlukile iirobhothi zasekhitshini esinayo kwimarike. Ke, ngamanye amaxesha kunzima ukuba sikhethe enye. Asazi ukuba kufuneka sijonge ntoni ngaphambi kokumiliselwa kuyo, ke namhlanje siza kukunceda.
Siza kukunika elona cebiso lililo kunye nalo lonke ulwazi oluchanekileyo Ke ukhetho lwakho lolona lufanelekileyo kwiimfuno zakho. Kungenxa yokuba asifani sonke, kodwa sifuna ukwenza ukuthenga okuhle kunye nokuhlala ixesha elide. Ke, nisezandleni ezilungileyo kwaye ngoku siza kunibonisa.
1 Yeyiphi irobhothi efanelekileyo yokupheka
2 Yeyiphi eyona robhothi yasekhitshini ithengiswa kakhulu
3 Zithini izibonelelo zeerobhothi zasekhitshini
Yeyiphi irobhothi efanelekileyo yokupheka
Ngaphandle kwamathandabuzo zininzi iimveliso kunye neemodeli ezininzi onazo kwintengiso. Kodwa kuzo zonke, kuya kufuneka usoloko ucinga ngothotho lwamanyathelo ngaphambi kokuwathenga. Kuba kuyinyani ukuba banezibonelelo ezintle kodwa ezi kufuneka zilungelelaniswe nobomi bethu.
Umthamo woomatshini bethu basekhitshini yenye yeendawo eziphambili. Kuba sizakuvavanya oku ngokwedinala esikuyo. Ukuba uhlala ungabantu abane bokutya, ayizukufana endlini ukuba babini okanye mhlawumbi babemnye kuphela abaphilayo. Ke ngoko, uneemodeli ezimbini zelitha kunye neelitha ezi-5.
Amandla yenye yeengongoma eziphambili. Kungenxa yokuba amandla amaninzi afana namandla ngakumbi kwaye aya kuhlala ixesha elide kunye neziphumo ezingcono. Abanye banamandla angama-500W, ngelixa abanye begqitha kwi-1000W ngokude.
Imisebenzi enayo yenye yeembono zokujonga. Kuba abanye banemisebenzi eli-12 kwaye abanye bangaphezulu kwe-8. Into elungileyo kukwazi ukuba zeziphi ezizisa kwaye ucinge ukuba ziya kufika nazo kuxhomekeke kwizitya oqhele ukuzilungisa. Iimodeli ezisisiseko esele zinemisebenzi ephambili kunye eyimfuneko.
Imisebenzi emininzi abanayo, ngakumbi izixhobo baya kubonelela ukubalungiselela.
Kufuneka uqiniseke ukuba iindawo kunye nezinto eziluncedo zicocekile okanye zinokuya kwindawo yokuhlamba iimpahla., uhlala ugcina ixesha.
Yeyiphi eyona robhothi yasekhitshini ithengiswa kakhulu
Ukuba uyazibuza ukuba yeyiphi eyona robhothi yasekhitshini ibalaseleyo, asinakuphendula ngeyodwa kuba zininzi iindlela ezichazayo. Kodwa kukho ezinye ezibeke njengeerobhothi ezithengisa kakhulu kwiAmazon.
Indawo yokuqala iya kwirobhothi yeCecotec Mambo Inemisebenzi engama-30, iilitha ezi-3,3 zomthamo, kunye nencwadi yeeresiphi kunye nesixhobo sokuhlamba izitya sikhuselekile. Ukuba ufuna umncedisi olungileyo, nceda ukhululeke ukuyithenga apha.
Kunjalo ukuba usafuna ukugcina imali encinci kodwa unokukhetha okuhle ecaleni kwakho, kukho le modeli uyibonayo apha nale ithengisiweyo apha ngokufanayo. Eyokuqala nge-900W kunye nemisebenzi eyimfuneko, ngelixa lesibini lineemenyu ezisi-8 ezilungiselelwe kwangaphambili kunye neelitha ezi-5 zomthamo.
La Uphawu lweMoulinex Ikwanemizekelo eliqela yeerobhothi zasekhitshini ezizibeke phakathi kwabathengisi abaphambili. Enye yazo yile ine-3,6 yeelitha zomthamo, kunye nencwadi yokupheka kunye neenkqubo ezi-5 ezizenzekelayo esizifumeneyo apha.
Zithini izibonelelo zeerobhothi zasekhitshini
Sele siyibonile into ekufuneka sijonge kuyo xa siyithenga, kunye nezinye zeemodeli ezithengisa kakhulu. Ewe, ukwazi konke oku, kuhlala kugxile kwizibonelelo.
Basigcinela ixesha ekhitshini, kuba zinokucwangciswa kwaye ziya kuwenza wonke umsebenzi ngaphandle kwesidingo sokuba silinde.
Zombini iqondo lobushushu kunye nexesha zilawulwa elingana nesiphumo esingcono.
Zineencwadi zokupheka ezisinceda ukulungisa izitya ngeendlela ezahlukeneyo.
Nje ukuba ugqibile, awuyi kuba nokuninzi kangako ukucoca kwaye ikhitshi lakho liya kuba ngaphezulu kokugqibeleleyo njalo.
Banamandla kwaye bayanda ukuyilwa ngakumbi ke abayithathi indawo enkulu kakhulu.
Ngokuqinisekileyo emva kwayo yonke le nto, uya kuba ubanike ithuba lokuyidibanisa nemihla ngemihla! Oomatshini bekhitshi baya kukunceda ngamaxesha onke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Ukupheka » Iirobhothi zasekhitshini, yeyiphi endifanele ndiyikhethe?
UMassimo Dutti uveza indlu entsha yokupapasha i-SS21: I-Edgy entsha